'निष्क्रियताको महारोगमा राप्रपा' , कमल थापा भन्छन रथ कुदाउन एउटै घोडाले तान्नु पर्छ ! - Dainik Online Dainik Online
‘निष्क्रियताको महारोगमा राप्रपा’ , कमल थापा भन्छन रथ कुदाउन एउटै घोडाले तान्नु पर्छ !
अध्यक्ष त्रय कमल थापा, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणाले नेतृत्व गरेको पार्टी राप्रपा मा फेरी विवादको स्थिति देखा परेको छ । अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आज यस्तो सन्देश दिएका हुन ।
थापा भन्छन् : ‘राप्रपा सत्ता केन्द्रित फोहरी खेलमा छैन। विगतका त्रुटि कमजोरी सच्याएर नीति र बिचार केन्द्रित राजनीति वर्तमान समयमा राप्रपाको मुख्य प्राथमिकता र ध्येय हो। राप्रपालाई वैकल्पिक शक्ति बनाउन हाल कायम निष्क्रियता महारोगबाट मुक्त हुनु अब अनिवार्य भएको छ। यही नै हाम्रो चाहना हो ।’
थापाले यस्तो स्थितिको दोष आफ्ना अन्य दुई अध्यक्ष तिर तेर्साएका छन् र एकल अध्यक्षको दाबी पनि पेस गरेका छन् । थापाले यसबाट आगामी महाधिवेशन मार्फत आफ्नो एकल नेतृत्वको दाबी गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
थापा अझै स्पष्ट सँग भन्छन् ‘दुई वा दुईभन्दा बढी घोडाले तानेको रथले तीव्र गति लिन सक्दैन।यो नैसर्गिक सत्य हो।यो सत्य नबुझेको होइन,तर तीव्र गति लिन नसके पनि सामान्य गतिमा हिँड्ला भन्ने आशा थियो।गतिहीन नै होला भन्ने सोचिएन। दुई अल्छी घोडाको बिचमा च्यापिएको तीव्र गतिको घोडाको हालत के होला ? च्यापिएर थला पर्न बेर छैन ‘।